လရောင်ဖြာကျ ဆောင်းညရွက်ကြွေ ကြယ်ကလေးရေ – ထက်ဝေး | လွတ်လပ်လှိုင်းမဂ္ဂဇင်း
လရောင်က ကိုယ့်ကိုလွှမ်းခြုံထားတယ်။ မြို့အ၀င်က ဘုရင်နောင်ရုပ်ထုရှေ့မှာ ကိုယ်ရပ်ရင်း လရောင်ကို ခံစားကြည့်မိတယ်။ လောကဓါတ်တစ်ခွင်လုံး လင်းထင်လို့။ ဒီလိုညမျိုးတွေပေါ့ စက်ဘီးလေးတစ်စီးကိုစီးလို့ မြို့ပြင်က ပန်းခြံလေးရှိရာ ကိုယ်လာတတ်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်ဟာ လရောင်ထဲမှာ လမ်းကိုရှာတတ်သူပါ နန်းရယ်။ ဝေးကွာနေတော့လည်းကောင်းကင်ကြီးကိုပဲ မျှော်ကြည့်နေရတာပေါ့။ တို့ရဲ့ရှင်သန်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပါယ်ဟာ ဘာလဲ။ တို့ပန်းတိုင်ဟာဘာလဲဆိုတာ သတိကပ်မိတယ်။
နှင်းဆီပန်းနီနီကို ကိုယ်ကမြတ်နိုးတယ်။ ကိုယ့်အိမ်မှာ ကြာသပတေးနေ့ဆို နှင်းဆီအနီကိုးပွင့် ပန်းအိုးလေး ထဲထိုးစိုက်လို့ ကိုယ့်ဘဝလည်း ဒီနှင်းဆီလို လှပခြင်း၊ တန်ဖိုးရှိခြင်း၊ မြင်သူတိုင်းနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်အောင် သင်္ကေတ ပြုဆုတောင်းမိတယ်။ ကိုယ့်နာမည်ရဲ့အရောင်လှပါစေ။ ကိုယ့်ချစ်သူလည်း အေးအရိပ်မှာငြိမ်းပါစေ။ စကြဝဠာ ကြီးထဲက အငြိမ်းဓါတ်တွေရရှိပါစေသား။ လောကကြီးဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆို တခါ က သူမအရမ်းချစ်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်အပေါ် အချစ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် လုံးဝမချစ်တာဆိုတဲ့စိတ်ကလေး တိတ်တိတ်ကလေး ၀င်နေရော့မယ်။ ကိုယ့်အတွက်တော့
ကောင်းကင်မှာ မီးပုံးပျံတွေရွေ့နေတာကိုကိုယ်ကြည့်လိုက်တယ်နန်း။ လောင်စာရှိနေတုန်းတော့ သွားနေကြတာ ပဲ။ တစ်ချို့လည်း စတင်ခြင်းမှာ မီးလောင်ပြာကျလို့၊ တစ်ချို့လည်း အမြင့်တက်ရင်း မီးလောင်လို့၊ တစ်ချို့လမ်း ခုလတ်မှာ။ တစ်ချို့လည်း အမြင့်ဆုံး၊ အဝေးဆုံးကို ပျံတက်လို့ အော်..မီးပုံးပျံလိုပဲ လူ့ဘ၀ကြီးမှာလေ။ ဘဝရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို တွေးရင်း ပန်းတိုင်ဆိုတာကို အဓိပ္ပာယ်ဖေါ်ကြရမယ်မဟုတ်လားကွယ်။
ကိုယ်က ညကိုခင်တွယ်တယ်။ ကြယ်ကလေးတွေကိုချစ်တယ်။ တိတ်ဆိတ်မှုထဲက အသံကိုနားစွင့်မိတယ်။ ကောင်းကင်ကြီးကြည်စင်နေတာကို ငေးမောရတာ သဘောကျမိတယ်လေ။ အခုလိုညမျိုးမှာ လရောင်ထဲ မီးပုံး ပျံတွေ ခရီးနှင်နေတာကို ကြည့်ရင်း ကြည်နူးမိပါရဲ့။ တို့တွေဟာ ခရီးသည်တွေလေ။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း လရောင်ကိုမခံစားချင်လို့ မင်းဆီကိုလာခဲ့တယ်။ မင်းကို လရောင် ကိုပြရင်း ကိုယ်တိုးတိုးဖွဖွလေး ပြောလိုက် တယ်။ ကိုယ်တို့ဟာ ခရီးသွားနေကြတာပါ။
လရောင်ဟာ စိတ်ကိုထွေပြားစေတယ်။ အတိတ်ကိုပြန်နှိုးတယ်။ အလွမ်းကိုမြင့်တက်လာစေခဲ့တယ်။ သတိ ရခြင်းငှက်တွေ မင်းဆီပျံခဲ့တယ်။
လူကို အရိုင်းစိတ်က ဆွဲခေါ်တာပဲ။ အရိုင်းစိတ်မွဲမှာ မင်းရိပ်ကနဲပါမသွားဖို့ သတိကပ်ထားပါ။ အာဏာရူး၊ မျက် နှာရူး၊ ဥစ္စာရူးတွေကြားထဲ မင်းစိတ်ကိုအလယ်မှာထားလိုက်စမ်းပါ နန်းရေ။ မင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဆီ သွားဖို့ ဘုရင့်နောင် ဖေါင်ဖျက်တိုက်ပွဲဝင်သလိုမျိုး သတ္တိမွေးထားလိုက်စမ်းပါ။ လောကဓံကို ကြံ့ကြံ့ခံလို့ ခရီးဆက်ကြ မယ်လေ။ လောကထဲတန်းဖိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ် မင်း ရပ်တည်နိုင်ပါစေ။ လောကအလှဆင်သူဖြစ်ပါစေ။ ပန်းကလေးတွေပျိုးတတ်သူ၊ အနုပညာကိုဖန်တီးထုဆစ်သူ၊ မသိမှုအမှောင်တွေထဲ သိခြင်းလရောင်ကို ဖျန်းပေး သူတစ်ယောက်ဖြစ်စေတော့။
နန်းရေ… မေတ္တာတရားက ငြိမ်းအေးတယ်ကွယ်။ ကိုယ်ကမင်းကို တိုးတက်စေချင်တယ်။ တည်ငြိမ်စေချင် တယ်။ဥာဏ်မြင့်စေချင်တယ်။မင်းရဲ့ခွန်အားနဲ့ အများအကျိုးအတွက် တာဝန်ထမ်းရွက်သူဖြစ်စေချင်တယ်။ဘယ် ခေတ်မဆို မေတ္တာတရားက အမွှေးဆုံရနံ့ပါပဲ။ ကိုယ့်မြို့ကလေးကို မင်းလွမ်းနေရော့မယ်။ ဘယ်သူမဆို ဇာတိ မြေကိုချစ်ကြတာပဲ။ ဇာတိမာန်ရှိကြတာပဲ။ ဘယ်ငှက်မှကိုယ့်အသိုက်ကိုမစွန့်ချင်ကြဘူးလေ။မင်းကို တို့တွေမနှင် ခဲ့ဘူး။ မင်းဆိုပြခဲ့တဲ့သီချင်းတွေနဲ့ ငါလွမ်းနေခဲ့ဖူးတယ်။ မင်းနဲ့အတူလျှောက်ခဲ့တဲ့ မြေလမ်းကလေးကို ညနေဆို ကိုယ်လျှောက်နေတတ်ခဲ့တယ်။ သိပ်သတိရတယ်နန်းရေ။ ဒီဘ၀မှာတော့ တို့မဆုံနိုင်ကြတော့ဘူးလားမသိ။ လူ ဆိုတာ စကားပြောဖေါ် ခံစားဖေါ်လိုတယ်။ လူတိုင်းဟာ ခံစားတတ်ကြတယ်။ ခံစားမှုနောက်ကို လိုက်လို့တော့ မရဘူး။ ကန့်သတ်ဘောင်တွေ၊စည်းတွေထဲ တို့နှစ်ယောက်ရပ်မိကြတာကိုး။ အချစ်ကလူကိုနွမ်းလျစေတယ်။ ပင် ပန်းစေတယ်။ အချစ်စစ်ဆိုတာ ဘာလဲကွယ်။
ကိုယ်က ဆရာကြီးပါရဂူ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ စိတ္တရလေခါ စာအုပ်ထဲက စာသားတစ်ခုကို ရွတ်ပြခဲ့ဖူးတယ်။ “ချမ်းသာမှုဆိုတာက တင်းတိမ်ရောင့်ရဲခြင်း ဖြစ်တယ်၊ ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာက ရပ်တန့်ငြိမ်သက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ ဘဝဆိုတာကတော့ ရပ်နားခြင်းမရှိတဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားခြင်းဖြစ်တယ်။ ပျောက်ပျက်ငြိမ်းအေးမသွားတဲ့ မွတ်သိပ် ဆာလောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ဘ၀ဟာ ရွေ့လျှားနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး နားထောင်နေခဲ့တယ်။မင်းနုတ်က ဘ၀ဆိုတာရပ်နားခြင်းမရှိတဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားခြင်းဆိုတာကို အထပ်ထပ်ရွတ် လို့။ ဘ၀ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာကို မင်းဖတ်တတ်ပြီလား၊ ဘာသာပြန်တတ်ပြီလား။ ဘ၀မတူတဲ့လူတွေက သူ့ဇာတ် ရုပ်နဲ့သူကလို့၊ ပျော်လို့။ တစ်ချို့လည်း သူ့ဇာတ်ရုပ်မှာ စိတ်မပါဘဲကပြလို့၊တစ်ချိ့ကလည်းဇာတ်ညွှန်းကို အလွတ် မရကြဘူး။ ကျောင်းနေရမယ့်အရွယ်က လမ်းဘေးရေခဲချောင်းရောင်းလို့။ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးကို သူ့မိခင် က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာလာအပ်ပြီး စားပွဲထိုး အလုပ်လစာကိုကြိုယူနေတဲ့အခိုက် ကလေးက လမ်းမပေါ်က ကျောင်းသွားနေတဲ့ ရွယ်တူကလေးတွေကို ငေးလို့။ အိမ်အကူမလုပ်ချင်ဘဲလုပ်နေရတဲ့ဘဝတွေ၊ တစ်ချို့လည်း နောင်လာ နောင်ဈေးသဘောမျိုးနဲ့ ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်ရောင်းစားခဲ့တာတွေ။ ဘဝတိုတိုထဲ အချိန်တွေဖြုန်းလို့ ဘ၀ကို အရောင်မခြယ်ခဲ့သူတွေ။ သူတို့ဇာတ်ညွှန်းကို သူတို့ဆွဲဆုတ်၊ ကြုံသလို သရုပ်ဆောင်သူတွေ။
နန်းရေ ..ဘဝဆိုတာ ..ဘဝဆိုတာ။
ဘ၀တွေကကြမ်းလွန်းတယ်တဲ့။ ကျောင်းထွက်ပြီး ဈေးဗန်းခေါင်းရွက် ဟင်ရွက်ရောင်းနေတဲ့ ကလေးမလေးက ကိုယ့်ရှေ့ညည်းတွားနေသံကြားမိတယ်။ ကိုယ်တပည့်လေးတစ်ယောက်ကတော့ KTVက ကောင်မလေး လေး တွေ အရမ်းလန်းတယ်လို့ ပြောပြန်ရော။ ဘ၀တွေက မတူညီကြ။ အသက်ရှုကြပ်တဲ့ လောကကြီးထဲ နန်းရေ… ဘ၀မှာ လသာညတွေရှိအုံးမှာပါ။
ကိုထီးဆိုထားတဲ့ သီချင်းစာသားထဲကလို ကိုယ်ဟာ မရေရာတဲ့ခရီးသွားပါ..တဲ့ ။မင်းရော ဘ၀ဆိုတာကို ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ခဲ့ပါသလဲ။ နန်းကရော ရေရာတဲ့ခရီးသွားလား၊ နန်းပြောတဲ့စကားတစ်ခုကို ပြန်အမှတ် ရမိတယ်။ “လူဆိုတာ နေချင်သလိုနေလို့ရတယ်၊ သေချင်သလိုသေလို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် ဘ၀ကို ကိုယ်လက် နဲ့ကိုယ် ဆေးရောင်ခြယ်သခွင့်ရနေတာပဲမောင်ရယ်။ အများအတွက် တာဝန်ထမ်းရွက်မှ တကယ်လှတာ လေ။ နန်းကတော့ လောကကိုအလှဆင်ချင်သူမို့ ကိုယ် နိုင်ရာ ပိုင်ရာအလုပ်နဲ့ လောကိုအလှဆင်မယ်။ ကျောင်းဆရာမလေးတစ်ယောက်အဖြစ် ဘ၀ကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီ။”
အဲ့ဒီနေ့က ကိုယ်က အနောက်ဘက်ကိုကြည့်ရင်းငေးရီလို့ အဝေးပျပျက တောအုပ်ကလေးကို နေမင်းက မေးတင်လို့၊ ငှက်တစ်အုပ်ဖြတ်ပျံသွားကြတာ ပန်းချီကားပဲ။ လောကကြီးက ဆည်းဆာနဲ့ လှနေတယ်။ အမှန်တ ရားတွေ၊ အရှိတရားတွေက လောကထဲရှိနေတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေနဲ့ လောကကြီးရပ်တည်နေတယ်။ လူဆို တာက စိတ်ဆောင်နေကြသူတွေချည်းပဲ။ လောကထဲ အလင်းရောင်တွေ ကြဲပက်ဖို့လက်တွေလိုတယ်။ ပရဟိ တစိတ်ကလေးက နန်းမျက်ဝန်းတွေမှာ အရောင်တောက်လို့ ။ တိမ်တွေကလည်း အရောင်တောက်လို့။ ကိုယ့် စိတ်အခွံထဲတော့ တိမ်တွေပြာနေလိုက်တာ နန်း။ အိုကွယ်.. ဒီလိုလှနေတဲ့ လောကကြီးထဲ ချစ်သူလက်ကလေး ကိုင်လို့ဆည်းဆာကို ငေးရတာလည်း ရသပဲလေ။ ကဗျာဆရာကြီး အိုမာခယမ်ကတော့ ဒုက္ခနဲ့တစ်ခါကြုံတိုင်း. …. ချစ်သူ့လက်ကို တစ်ခါကိုင်ပါရစေ..တဲ့။
အချစ်ကို ယိုးမယ် မဖွဲ့ကြေးနော်
အခုလို လသာညတွေမှာ ကိုယ်တို့စိုက်ခဲ့တဲ့ စပယ်ပင်လေးတွေလည်း အိပ်နေလောက်ပြီ။ တို့လျှောက်ခဲ့တဲ့ မြေလမ်းကလေးလည်း လွမ်းနေလောက်ပြီပေါ့။ ကောင်းကင်မှာ ကြယ်တစ်ချို့လင်းလက်နေရဲ့။ ကြယ်တွေက မျက်စပစ်လို့ ကိုယ့်ကိုလှောင်ရယ်နေကြသလား။ လရောင်ဟာ လွမ်းစိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဆို ကိုယ် မင်းကိုလွမ်း နေတယ် နန်း။ ရင်ချင်းဆက်ဖို့ တယ်လီဖုန်းလိုင်းမကောင်းတဲ့ရွာလေးမှာ မင်းရင်ကိုချကျွေးလို့ နာသုံးနာနဲ့ ပျော် နေပြီလား။ ကိုယ့်ကိုမေ့ပစ်ဖို့ ဆေးတစ်ခွက်မင်းသောက်ခဲ့ပြီလားနန်းရယ်။ ပန်းကျောင်းမှာ ပန်းတွေပျိုးလို့ ပန်း ပျိုးလက်ဘ၀နဲ့ အေးအရိပ်မှာ ငြိမ်းပါစေကွယ်။ မင်းဟာ နာမည်ရှိတဲ့ ကြယ်ကလေးတစ်ပွင့်ပါ။ မှိန်ပေမယ့် လင်းနေပါတယ်လို့..။
အို..ချစ်သူ ဘဝကိုအလှဆုံးဆေးရောင်ခြယ်ပါကွယ်။ ရင်ထဲမှာတကယ်ရှိရင် တို့တွေ မဝေးဘူး၊ စိတ်ကူးထဲမှာ မင်းအမြဲရှိနေရင် ငါတို့ ရွှေလက်တွဲလို့ရနေတာပဲ မဟုတ်လား။ စိတ်တွေမမှောင်စေနဲ့နော်။ လွမ်းလွန်းလို့လည်း ငေးရီမနေပါနဲ့။ သိပ်သတိရတဲ့အခါ ငှက်ကလေးတွေကို အစာကျွေးပါ။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ မဖြစ်ရတဲ့လောကထဲ ဖြစ်ရာဘ၀မှာ မင်းပျော်ရွှင်အောင်နေပါ။ သတ္တိရှိရှိနဲ့ ဥာဏ်ဦးဆောင်လို့ ခရီးဆက်ပါ။ ရှင်သန်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ရှာဖွေဖေါ်ဆောင်လို့ သစ္စာအရောင် ထွန်းပြောင်ပါစေကွယ်။ တို့ တကယ်ချစ်ခဲ့ကြတယ်။